(Xog) Dhismaha Guryo uu leeyahay MW Farmaajo oo ku yaal Nairobi oo gabo-gabo maraya | SMC
Home WARARKA MAANTA (Xog) Dhismaha Guryo uu leeyahay MW Farmaajo oo ku yaal Nairobi oo...
(Xog) Dhismaha Guryo uu leeyahay MW Farmaajo oo ku yaal Nairobi oo gabo-gabo maraya
Waxaa gabagabo maraya dhismeyaal waaweyn oo MW Farmaajo ka dhisanayo magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Daarta koowaad oo ka kooban apartments ama guryo degaan oo ku yaalla meel ku dhow masjidka Hurlingham iyo Xarunta Wasaaradda Difaaca ee Kenya.
Dhismahaan oo dhowr dabaq ka kooban ayaa mar hakad la geliyay markii mas’uuliyiinta amniga Kenya ay shaki ka muujiyeen dhismaha oo dhererkiisu uu ku fooraro Xarunta Difaaca Kenya ee DoD loo yaqaano.
Hase yeeshee Qareen magaciisa la yiraahdo Axmed Aden oo ku magac dheer Axmed Dheere, qaraabana la ah Madaxweyne Farmaajo ayaa arrintaasi laaluush malaayiin shillin ka Kenya ku bixiyay si loo sii wado dhismahan casriga ah ee malaayiinta dollar ku kacayso.
Dhulka uu ku fadhiyo dhismahan ayaa ka mid ah goobaha ugu qaalisan magaalada Nairobi, waxaana muuqata hantida ummadda Soomaaliyeed ee masaakiinta ah si xaaraan ah daaro looga dhisanayo meelo ka baxsan Somalia, iyadoo lacagtii wax loogu qaban lahaa dadka barakaceyaasha ee daadaka qaadeen, qaarna la il daran yihiin macluul uu MW Farmaajo iyo reerkiisa aay daaro waa weyn uga dhisanaya dalalka deriska ah,
Daarta labaad ee Farmajo ka dhisanayo magaalada Nairobi, waxa ay ku taalla agagaarka Xarunta Madaxtooyada Kenya ee magaalada Nairobi. Goobtan ayaa ah meesha ugu qaalisan magaalada Nairobi, waxaana ku yaalla xarumo badan oo dowladeed,kuwa hay’adaha caalamiga iyo weliba degaan ay aad u jecel yihiin madaxda Kenya iyo diblomaasiyiinta shisheeye.
Waxaa goobtan Madaxweyne Farmajo looga dhisaya dhismo weyn oo villooyin ah, guryahan oo bil kasta ay ka soo geli doonto kumanaan kun oo dollar-ka Mareykanka ah. Saraakiil ka tirsan waaxda dhulka iyo canshuuraha Kenya ayaa SMC u sheegay in labada guri ee waaweyn ee magaalada Nairobi laga dhisayo ay ku qoran yihiin Qareen Axmed Dheere iyo Xasan Cabdullaahi Farmaajo oo la dhashey Madaxweyne Farmaajo.
Musuqmaasuqa baahsan ee ka jira dowladda Madaxweyne Farmaajo ayaa maalinba maalinta ka sii dambeysa si baaxad leh u soo shaac baxaysa, iyadoo dhowaan Xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ka mid ah kaaliyeyaasha Madaxweyne Farmaajo uu Nairobi ka iibsadey dhismo dhowr guri ay ku yaallaan oo ku kacay adduun gaareysa 5.7million oo dollarka Mareykanka ah. Dhismahaasi ayaa waxaa iska iibinayey qoys Kenyan ah oo dhaxal ahaan looga tegay, waxaana uu ku yaalla faras magaalaha magaalada Nairobi.
Waxaa nasiib darro ah in culumada diinta Islaamka ee dowladda Farmaajo taageera inay marnaba ka hadlin xatooyada iyo boobka ay dowladdan ku kacayso, iyado weliba mid ka mid ah dhismayaashan laga ag dhisay goobta masjidka Hurlingham oo ay culumadaasi qaarkood ku tukadaan.
Shirkadda Hass Petroleum oo ka hawlgasha Somalia iyo Kenya oo maalmahan isku bedeshay shirkad ka shaqeysa ganacsiga (money laundry) ama lacagaha sida khaldan ay dembiileyaasha isugu xawilaan ayaa la rumeysan yahay inay gacan ka geysaneyo ama fududeyso lacagaha mas’uuliyiinta Soomaaliyeed ka soo xadaan gudaha dalka ee Kenya loo soo daabulayo. Shirkaddan ayaa waxaa iska leh rag ay qaraabo yihiin Madaxweyne Farmaajo oo naas nuujin gaar ka hela hay’adaha dowladda , siiba waaxda canshuuraha oo siisa canshuur dhaaf sharciga ka baxsan, iyadoo badeecadaha canshuur dhaafka loo siiyana lagu iibiyo suuqayada dalka.
Madaxweyne Farmaajo waxaa la gudboon inuu soo xusuusto dhaartii uu maray 8 February 2017, uuna maanka ku hayo iyo beri Ilaahay hortiisa lagu weydiin doono xatooyada boobka hantida shacabka Soomaaliyeed uu lahaa.
Previous articleItoobiya oo ciidamadeeda kala baxayso Gobolka Gedo, iyo welwel soo food saaray Farmaajo
Next articleCiidanka TPLF oo gantaallo ku garaacday Garoonka Diyaaradaha & Wasaaradda Warfaafinta Eriteriya